Iraka manokan’ny ONU, Menkerios : « Tohananay ny fifidianana filoha amin’ny 2018 » | NewsMada
Iraka manokan’ny ONU, Menkerios : « Tohananay ny fifidianana filoha amin’ny 2018 »
Par Taratra sur 06/10/2017
Tsy azo iadian-kevitra. Nivoitra tamin’ny fanambarana nataon’ny solontena sady iraky ny Firenena mikambana, Haile Menkerios, nandalo teto amintsika ny hiatrehana ny fifidianana. Tsy niresaka fitsapan-kevi-bahoaka na fifidianana lalàmpanorenana ny tenany.
“Tanjon’ny fivahiniana teto ny fanohanan’ny ONU ny dingana hirosoana amin’ny fifidianana anaty fitoniana sy mangarahara, amin’ny taona 2018”, hoy ny fanambarana. Nandao an’i Madagasikara, omaly, ny tenany rehefa nivahiny efatra andro teto. Nialoha izany anefa, nihaona tamin’ireo lehiben’ny Andrimpanjakana sy ny mpanao politika ity iraky ny ONU ity. “Niara-niaiky ny rehetra fa ilaina tokoa ny fifidianana anaty fitoniana sy azo antoka”, hoy ihany ny fanambarana. Na izany aza, navoitran’izy ireo amim-pomba diplaomatika fa tokony hanana finiavana hiaraka hitady vahaolana ny rehetra ary tokony hahita marimaritra iraisana, araka ny fanambarana ihany. Ny fikasan’ny fitondrana hanitsy lalàmpanorenana izany tokony hikarohana vahaolana izany, raha miainga amin’io fanehoan-kevitra io noho ny amboletran’ny fanjakana na efa eo aza ireo maro anisa mitsipaka tanteraka ny hantanterahana fanitsiana ny lalàna fototra. Efa nialohavan’ny fihaonan’ny sekretera jeneralin’ny ONU, Guteuress, sy ny filoha Rajaonarimampianina tany New York farany teo izao dian’ity vahiny ity teto amintsika izao. Tsy nisy resaka lalàmpanorenana ny fihaonan’ny roa tonta.
Tsiahivina fa tsy ankasitrahan’ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena hatrany amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny hikitihan’ny mpitondra io lalàmpanorenana io. Anisan’izany ny eo anivon’ny Pnud, ny Amerikanina, ny Alemà…